Climate Change & Sustainability protocols by Daraz Myanmar (Shop MM)
Sustainability & Climate Change – ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း0451
ခုနှစ် ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကမ္ဘာအနှံ့လှုပ်ရှားမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာပြီး ၄င်းထို့ထဲ ထင်ရှားသောလှုပ်ရှားမှုများမှာ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၊ “Me Too” လှုပ်ရှားမှု ၊ “Stop Asian Hate” လှုပ်ရှားမှု၊ လိင်တူထောက်ခံလှုပ်ရှားမှု၊ “Black Lives Matter” လှုပ်ရှားမှုများအပြင်၊ တခြားလူပြောများလာသော လှုပ်ရှားမှု ၂ ခုမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလှုံ့မှု (Mental Health Awareness) နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (Climate Change) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေရှင်သန်ကျက်စားလာတာ နှစ်ပေါင်း ၃ သိန်းကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ လူသားအရင်းအမြစ်တွေ နှစ်စဉ်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်တည်ရှင်သန်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအပေါ်လည်း နှစ်စဉ် သက်ရောက်မှုများစွာရှိနေပါတယ်။
၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင် ကမ္ဘာကြီးပူ‌‌နွေးမှု ပိုမိုသိသာလာ၍ မူမမှန်သောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ ထင်ရှားလာမှုအပေါ် အလေးပေးလှုံ့ဆော်မှုများစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
သေးငယ်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှုက ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့ မိမိအနေဖြင့် ကမ္ဘာ‌‌မြေပျက်စီးယိုယွင်းမှုတိုက်ဖျက်ရာတွင် တပိုင်တနိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အချက်များကို Shop MM မှ ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
“Shop App MM သည် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ်တစ် အွန်လိုင်းရှော့ပင်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်”
Shop App MM ကို Download ရရယူရန်လင့်ခ် – “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
🌳 သစ်ပင်စိုက်ပါ 🌳
သစ်ပင်တွေက ‌လေထုကိုသန့်စင်ပေးပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ‌လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးကိုသာမက လူသားအရင်းအမြစ်တစ်ခုလုံးကိုပါ များစွာအထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ တတ်နိုင်သမျှ သစ်ပင်များများစိုက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
⚠️ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှု လျှော့ချပါ ⚠️
နှစ်ပေါင်း ၁ ထောင်ခန့်ထိ မဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့ ပလတ်စတစ်အန္တရာယ်ဟာလည်း အားလုံးသတိထားမိသားအရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများသာမက၊ ‌သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေနေသက်ရှိများနှင့် ဂေဟစနစ် (Eco-system) ကိုဆိုးကျိုးများစွာပေးနေတဲ့ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုကို အခုကစပြီး တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချလိုက်ကြရအောင် …
📄 စက္ကူသုံးစွဲမှု လျှော့ချပါ 📄
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့ ‌အားသာချက်တွေထဲကတစ်ခုပြောပါဆိုရင် စက္ကူသုံးစွဲမှုစနစ်လျော့ကျလာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ယခုစနစ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
♻️ Recycle ပြုလုပ်ပါ ♻️
တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများထက် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည့်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခြင်းကလည်း ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းမှုရဲ့ အဓိကသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
📦 လှူဒါန်းပါ 📦
မိမိအသုံးမပြုတော့တဲ့ပစ္စည်းများကို ချို့ ငဲ့သူများအား ပြန်လည်မျှ‌‌ဝေပေးခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်တဲ့သုံးစွဲမှုနှင့် ဖြုန်းတီးမှုတို့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ လျော့ကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
💧 ရေချွေတာပါ 💧
ရေကို တတ်နိုင်သမျှချွေတာခြင်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရုံသာမက မိုးခေါင်ရေရှား‌ဒေသနေသူများအတွက် စာနာမှုကိုပါ ပြသရာရောက်ပါတယ်။
🚲 မော်တော်ယာဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချပါ 🚲
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးကဲ့သို့သော စွမ်းအင်မပါတဲ့ ပို့ဆောင်ယာဉ်များကို အသုံးပြုခြင်းကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရာရောက်ပါတယ်။
🥗 အစားအသောက်အလေအလွင့်ဖြစ်မှု လျှော့ချပါ 🥗
မိမိစား‌သောက်သုံးစွဲမယ့် ပမာဏကိုသာ တွက်ချက်ဝယ်ယူပြီး ပိုလျှံခဲ့လျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် သေချာထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ဖြုန်းတီးမှုလျှော့ချစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
“နှမ်းတစ်စေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်ပေမဲ့၊ ၇ ဘီလီယံကျော်သော နှမ်းစေ့တွေနဲ့ဆို ဆီများစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်”
ဒါကြောင့် .. ယခုအချိန်ကစ၍ မိမိအိမ်က မလိုအပ်တဲ့ မီးတွေကိုပိတ်ပြီး Shop MM နဲ့အတူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ပါဝင်လိုက်ကြရအောင်။
Shop App MM သည် လူသားများ၏နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို သန်းပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အွန်လိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
“To Prevent & Protect is better than To Repent & Repair”
Becoming an environmental warrior doesn’t requireasuperhero-like effort. Small actions can makeabig difference. The most obvious ways to help the environment are to conserve energy and use less water . But if you put on your green thinking cap, you can come up with lots of less obvious, but no less important, earth-friendly habits.
Sustainability does not necessitate large-scale actions. In fact, we can all help protect the environment – one small step atatime. If we collectively undertake the following measures, we can transform the world.
“Shop App MM is Myanmar’s No.1 Online Shopping App which is involved for the sustainability awareness”
Download our Shop App MM >> Click Here!
🌳 Plant A Tree 🌳
Plant are essential for clean air. So, every tree planted cultivatesacleaner environment, reducing health-related risks.
⚠️ Say “No” To Plastic ⚠️
Plastic is non-recyclable. Thus, minimize plastic usage by utilizing reusable cups/bottles and cloth tote bags.
📄 Go Paperless 📄
Going Digital Prevents trees from being unnecessarily cut down. Hence, use soft copies and avoid printing paper.
♻️ Recycle & Reuse ♻️
Buy reusable items and prolong them as much as possible. Additionally, trash your garbage into separately-lebeled bins.
📦 Donate Used Items 📦
Donate products you don’t require to the needy. It will reduce waste and simultaneously help the underprivileged.
💧 Save Water 💧
don’t leave the tap open when it’s not in use. Also, reduce the amount of water used during house chores.
🚲 Drive Less 🚲
Fuel-less mobility is environment-friendly and cost efficient. Hence, try walking or using public transportation to reach your destination.
🥗 Don’t Waste Food 🥗
Monitor the amount of food you buy. If there are any leftovers, freeze them so they can be used later.
Start now. From today. Switch off those extra light in use and save the world with Shop App MM.
Previous Article101 Dog Care Tips: For BeginnersNext Articleစျေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော Skincare များဖြင့် အခြေခံကျကျ နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်းများ